Maxuu yahay hadalka doodda abuuray ee uu yiri Barkhad? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxuu yahay hadalka doodda abuuray ee uu yiri Barkhad?
Batuun, ayaa la kulmay dhaleeceyn xoogan, kadib markii uu si aan la jecleysan uga hadlay, raafka Laascaanood, isla-markaana uu weerar ku qaaday RW Soomaaliya.
HARGEYSA, Soomaaliya – Hadal uu warbaahinta ka jeediyay Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun, oo ka tirsan xubnaha golaha wakiilada ee Somaliland, ayaa abuuray hadal heyn xooggan, waxaana si weyn loogu eedeeyay inuu garab u noqday kooxda raafka u qaabilsan Muuse Biixi, isla-markaana uu taageeray dhibaatada baaxadda leh, ee lagula kacay shacabka dan-yarta ah ee ka soo jeeda Koofurta soomaaliya.
Barkhad, oo maanta war-fidinta la hadlay, ayaa Xukuumadda Soomaaliland ku taageeray raafka ay ka geysatay degmada Laascaanood ee xarunka gobolka Sool, inkastoo uu sheegay in dadka la saaray ee maatada ah, nidaamka loo maray uusan ahayn jidkii saxda ahaa, hadana wuxuu hoosta ka xariiqay in tallaabooyinka amniga lagu xaqiijinayo uu Xisbiga uu ka tirsann yahay ee WADANI uu ku taageersan yahay laamaha nabad-galyada.
Sidoo kale, wuxuu weerar ku qaaday Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo uu ku tilmaamay Ra’iisul Wasare u adeega reer kaliya (Heyb gooni ah), “Rooble, wax aan leeyahay haddii dhiigga dadka Muqdisho micno aanu kula laheyn adiga, anaga dhiigga dadka Somaliland dheeman nagala qaalisan”. Ayuu yiri Barkhad.
Hadalka Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun, wuxaa lagu fasiray in shacabka reer Koofureed ee la soo barakiciyay uu u yaqaan argagixiso, isla-markaana uu rumeysan yahay in uuan amniga Sool, hagaagi doonin, inta la masaafurinayo inta ku hartay gobolka.s
Hadalkaan, wuxuu dhaliyay dood xooggan, saacadihii la soo dhaafay ayaana si weyn loogu lafa-guray baraha bulshada, waxa ay Xildhibaan Barkhad daku ku dhaleeceeyeen inuu isugu yahay dulmane difaacaya dulmiye-yaal, isla-markaana uu xaqii ay lahaayeen duudsiinayo dulmanayaal dan-yar ah.
Dad caan ah, oo siyaasiyiin iyo masuuliyiin xilal haya ku jiraan, ayaa ka mid ah dadka sida weyn kaga falceliyay hadalka ka soo yeeray Batuun, kaas oo Soomaali oo dhan ay si weyn u taageertay xilligii uu guda jiray ololihiisa doorashada, taas oo sababtay inuu noqdo shaqsiga cododka ugu badan ku galay Aqalka Wakiillada Soomaaliland.
Xildhibaan Barkhad Jaamac, wuxuu ka soo jeedaa beelaha la heyb sooco, wuxuu si weyn ugu ololeeyay ka hor inta uusan kursiga ku fariisan, inuu wax ka qaban doono tacaddiyada ka dhanka ah, kuwa danta-yar ee aan is-difaaci kain, taas oo si weyn loogu taageeray, hayeeshee, waxaa Soomaali oo dhan layaab ku noqotay tallaabada uu maanta qaaday ee qarda-jeexa lagu tilmaamay.